Nhema Mesa: tevera kufambira mberi ... | Linux Vakapindwa muropa
Pane nhau dzakakosha mu yazvino Black Mesa yekuvandudza, Yevateveri vemitambo yemavhidhiyo Hafu Hupenyu. Kana iwe uchida kuziva zvakawanda, unogona kubvunza webhusaiti ye chiutsi, iro rinozivikanwa Valve chitoro, icho nenzira, ndiyo kambani yakaita kuti Hafu-Hupenyu ikwanisike, kana paine mumwe munhu aisaziva ... Pasina kupokana rimwe remazita andinofarira uye rakandipa maawa mazhinji yekutamba kare.
Kuburitswa kutsva hakuna kunyanya kukura, asi kune zvakakosha zvakanyanya zvaungade. Vagadziri vacho pachavo vanga vari mutariri wekuzivisa «Matanho makuru»Mune zita iri, uye kuti«yakazara seti yezvinhu zvekurwiswa, dziviriro, vhidhiyo mutambo wekunyepedzera ungwaru, uye graphic mhedzisiro«. Asi kuchine zvakavanzika zvakawanda zvavasingade kuudza kuti vaburitse huwandu hwakawanda.
Pamusoro peizvozvo, vagadziri vanobatanidzwa varatidzirawo mifananidzo mitsva, inotora pamusoro pemutambo wevhidhiyo kuratidza kufambira mberi uku, pasina mubvunzo vane mwoyo murefu kuti tione mhedzisiro uye titange nakidzwa nemutambo wevhidhiyo uyu manje. Nenzira, tiri kutaura nezveBlack Mesa uye mumwe munhu anogona kunge asingazive kuti chii, muchidimbu, iri Mod yeHafu Hupenyu 2, kuwedzerwa kwezita rekutanga.
Nhema Mesa: Sosi inovimbisa kupa remake yeiyo Hafu-Hupenyu vhidhiyo mutambo wakanyatsogadzirirwa vateveri vemutambo uyu wevhidhiyo wakabudirira. Iyo yakavakirwa paHalf-Hupenyu 2 uye inosimudzira kusvika mukota yechipiri ye2019, zvakare yeLinux. Izvo ndizvo zvakarongwa, asi ndinovimba hapana kana kunonoka. Iwe unotoziva kuti iyo zvakare yakavakirwa pasimba reiyo injini injini mabviro uye iyo Gameplay uye inoonekwa chimiro yagadziriswa. Iyo ine yepamutemo rutsigiro rweValve, saka zvishoma zvishoma zvinogona kutaurwa nezve chii chichava kumwe kubudirira ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Graphics » Nhema Mesa: tevera kufambira mberi ...
Purism inoda kukudzidzisa iwe maitiro ekugadzira mitambo yefoni yako neLinux